Yiziphi izinhlobo zeziphepho ezikhona? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Los i-tornados Ziyizimo zesimo sezulu ezethusa futhi zihehe abantu abaningi ngokufanayo. Futhi zingamandla abhubhisa kakhulu emvelo, akwazi ukufinyelela amakhilomitha angama-400 ngehora ngenkathi ecekela phansi yonke into esendleleni yayo.
Kepha, yize zonke zibukeka zifana, kukhona empeleni izinhlobo ezahlukene zeziphepho. Sazise ukuthi ziyini.
1 Izinhlobo zeziphepho
1.1 Isiphepho esiningi se-vortex
1.2 Ukuqhuma kwamanzi
1.3 Umgqomo womhlaba
2 Babukeka njengeziphepho ... kepha akunjalo
2.2 Uthuli noma isihlabathi siyazungeza
2.3 Umlilo uyajikajika
2.4 Umusi uyajikajika
Isiphepho esiningi se-vortex
Kuyisiphepho lapho amakholomu omoya amabili noma ngaphezulu anyakazayo azungeza isikhungo esivamile. Zingavela kunoma yikuphi ukusakazwa komoya, kepha zivame kakhulu ezinkanyaneni ezinkulu.
Eyaziwa nangokuthi ipayipi lamanzi, yisiphepho esisemanzini. Zakha emanzini asezindaweni ezishisayo nakwezifudumele, ezisekelweni zamafu ezibizwa I-Cumulus congestus.
Ebizwa nangokuthi i-non-supercellular tornado, isiphepho noma ifaneli lefu, noma ukuqhuma komhlaba ngesiNgisi, yisiphepho esingahlobene ne-mesocyclone. Banesikhathi esifushane sokuphila, kanye nefanele yokubanda engavamisile ukuthinta phansi.
Imvamisa zibuthakathaka kuneziphepho zakudala, kepha akudingeki zisondele kakhulu ngoba zingadala umonakalo omkhulu.
Babukeka njengeziphepho ... kepha akunjalo
Kunokwakheka okuningi okubonakala njengeziphepho, kepha empeleni akusikho:
I-eddy encane emi mpo ehlotshaniswa ne-gust front noma i-downburst. Awaxhunyiwe kusisekelo sefu, ngakho-ke awathathwa njengeziphepho.
Uthuli noma isihlabathi siyazungeza
Yikholomu yomoya emile ezungeza yona uqobo lapho ihamba, kepha ngokungafani neziphepho, amafomu ngaphansi kwesibhakabhaka esicacile.
Kuyimijikelezo ukuthi thuthukisa eduze komlilo wequbula, futhi azibhekwa njengeziphepho ngaphandle kokuthi zixhuma nefu le-cumuliform.
Kuyinto engavamile kakhulu ukubona. Kwakhiwa ngentuthu ekhishwa ngamashimula esitshalo sikagesi. Kungenzeka futhi emithonjeni eshisayo, lapho umoya obandayo uhlangana namanzi afudumele.
Uke wezwa ngalolu hlobo lwesiphepho?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yiziphi izinhlobo zeziphepho ezikhona?